Get in touch with entrusted 2nd hand car dealers in Japan | ဂ်ပန္မွကား
လံုျခံဳမွု-အရည္အေသြးေကာင္းမွု-ၾကာရွည္ခံမွု ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ကားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္႔အရိုးရွင္းဆံုးစကားလံုးသံုးလံုးျဖစ္ပါတယ္။
ထိုစာလံုးသံုးလံုးသည္ပင္ ဂ်ပန္ကားကို အသံုးျပဳနိုင္ရန္သည္ သန္းနွင့္ခ်ီသည္႔လူမ်ား၏အိမ္မက္ျဖစ္ေနသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အြန္လိုင္း၀က္ဆိုဒ္အကူအညီျဖင့္ ကား၀ယ္ယူျခင္းမွာအလြန္လြယ္ကူျပီး ေစ်းနွုန္းလည္းအလြန္သက္သာလွပါသည္။ ဂ်ပန္ကားပုိင္ဆိုင္ေရးသည္ အိမ္မက္တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပဲ အမွန္ပင္ရယူနိုင္ပါျပီ။
ဤေနရာတြင္ ကြ်နု္ပ္တို႔မွ လူသိမ်ားသည္႔ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား၏စာရင္းကို သင္႔အတြက္စုစည္းေပးထားပါသည္။ သူတို႔သည္ ကြ်မ္းက်င္မွုနွင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာရွိသည္႔ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကျပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ အျမဲအစဥ္သင့္ရွိေနပါသည္။
ဤကုမၸဏိအမ်ားစုသည္ CAR FROM JAPAN ၏အသင္း၀င္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ကြ်နု္ပ္တို႔၀က္ဆိုဒ္မွတဆင္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ CAR FROM JAPAN ၀က္ဆိုဒ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္သည္႔ေငြေၾကးေပးေဆာင္မွုမ်ားအားလံုးသည္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး စိတ္ခ်ရစြာ႔သေဘာၤျဖင့္ပို႔ေဆာင္မွုကိုလည္း အာမခံပါသည္။
ထပ္ေစာင့္မေနပါနဲ႔ေတာ႔! အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆီဆက္သြယ္ျပီး ေထာင္နွင့္ခ်ီသည္႔ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားကိုၾကည္႔ရွုလိုက္ပါ။
ေက်ာ္ၾကားမွု	A-Z	Z-A	စေတာ့အမ်ားစုအေရအတြက္	ေရာင္းရန္သိုေလွာင္ထားေသာ အနည္းဆံုးကားအေရအတြက္	မၾကာေသးမွီက ထပ္ထည္႔လိုက္ေသာ
Morimoto Trading INC
Chuo 2-8-1,Saitama Misato-shi,Saitama ,3410038;
ပြည်ပမှာဝယ်လက်တစ်ခုချင်းစီကိုနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည် exporter အထူးကားဟောင်း, ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အနှံ့လေလံပွဲစျေးကွက်အတွက်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရရှိနိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှုအတွက်ဝယ်ယူပါစေ။ ကျနော်တို့ပြည်ပမှာစျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီမှအရည်အသွေးမြင့်ပညာသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းပညာရှိသံသယတစုံတခုကိုမျှယ်ယူကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ဂျပန်အတွက်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှု၏လျင်မြန်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာရေကြောင်းပေး။
5-1-16, Amami Minami, Matsubara-shi, Osaka, 580-0033
ကျနော်တို့ကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းတွေများအတွက်အရည်အသွေးကားများဆက်ကပ်။ DIYATA JAPAN ဂျပန်နိုင်ငံတွင် exporter အသက်အကြီးဆုံးကားဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကမ္ဘာလုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများမှ 10 နှစ်ထက်အတှကျအသုံးပွုကားများတင်ပို့၏လယ်ပြင်တွင်ဖြစ်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကသူ့ဟာသူအဘို့အပြော၏။ ကျနော်တို့ကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းတွေများအတွက်အရည်အသွေးကားများဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့အများစုငါတို့သည်လည်း BMW ကား, Subaru, Land Rover, တူအချို့သောနိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း Toyota, Nissan, Nissan ကားများကဲ့သို့ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်, ... etc နှင့်အတူကိုင်တွယ် ... .etc
SAS Co., Ltd.
1-4-8-401 SHIKANOSHITA-DORI NADA-KU, KOBE, JAPAN
သင်၏လက်၏စွန်ပလွံအတွက် fit ကြောင်းမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်နှင့်အစွမ်းထက်သောကွန်ပျူတာများကိုဤအနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်, ဂျပန်ကနေကားဝယ်ယူလွယ်ကူပါတယ်။ သို့သော် SAS (Sugiya မော်တော်ယာဉ်ပေးသွင်း) မှာကျွန်တော်အဲဒါကိုမထိသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲတစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှု (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်စိတ်ဖိစီးမှုများ) ကိုနားလည်သဘောပေါက်။ "ငါတကယ်ငါဓါတ်ပုံထဲမှာမြင်သောအရာကိုရသွားလား" "ငါ့ပိုက်ဆံပေးပို့ဖို့ကဘေးကင်းလုံခြုံလား?" "ငါပေးသွင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား?" SAS အအသုံးပြုကားတစ်စီးပို့ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့တတ်နိုင်သမျှကားတစ်စီးဝယ်ယူသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံစေရန်ဟောင်းနွမ်းခေတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏အဆုံးအမနှင့်အတူခေတ်သစ်အင်တာနက်အဆင်ပြေ၏အနှစ်ကိုပေါင်းစပ်။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါတှငျ SAS-ဂျပန်ကိုရှာခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထိရောက်မှု၏အားသာချက်ယူမှဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
5-21-823 Hanakumacho, Chuo-Ku, Kobe, Hyogo
MYTHOS Inc မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် !! ကျနော်တို့ဂျပန်ကနေအရည်အသွေးမြင့်အသုံးပြုမော်တော်ကားတင်ပို့။ ကျနော်တို့က auto လေလံပွဲမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာရနှင့် (လိုအပ်တဲ့အခါ) သတိထားစစ်ဆေးမှုများပြီးနောက်, ပြန်လည်ပြုပြင်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ကိုကယ်နှုတ်ကိုစိတ်ကြိုက်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကား၏အခြေအနေအပေါ်အပြည့်အဝ-အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ကားကျနော်တို့ဂရုတစိုက်လေလံပွဲမှာတက်ခူးကားများသိုလှောင်။ လိုအပ်ပါကကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ကျနော်တို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဘို့ငါတို့ခြံ၌ထညျ့, ပြီးတော့ကျနော်တို့အသံစနစ်အတွက်အဆင့်မြှင့်သို့မဟုတ်မော်နီတာ setting တူတချို့ custom လုပ်ပါ။ အလျင်အမြန် Delivery ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြီးမားဆုံးပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်ချောမွေ့သည်နှင့်သူတို့ကရေကြောင်းနေ့စွဲတွေအတွက်အများကြီး options များရှိသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျလိုအပျမဆိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စီစဉ်နိုင် - က JEVIC, EAA, JAAI, INTERTEK စသည်တို့ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အဆင်သင့်ပါပဲတည်ငြိမ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို chat သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်အခမဲ့ခံစားရအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်! WhatsApp ကို / MOB / SMS / စာ: +81 90 9055 9996 (24 နာရီကြာရရှိနိုင်ပါ) Skype ကို: Mythos Inc မှ JAPAN
2-4-3,Meguritacho, Higashimurayama City,Tokyo,189-0025;
ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကို Watch! အကြောင်းပြချက်စနစ်တကျရှိသောကြောင့်! မင်္ဂလာပါ! ဒါကလီမိတက် Kurunavi Co. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုကြည့်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကိုကျနော်တို့အားလုံးဂျပန်ကိုကျော်ထံမှကားဟောင်းဝယ်ယူရန် "အရည်အသွေးမြင့်ကားများအဘို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း" ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အဆုံး-အသုံးပြုသူများထံမှတိုက်ရိုက်မဝယ်ကတည်းက, ငါတို့သည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းမှာသငျသညျသူတို့ကိုမရောင်းနိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကားတွေအများကြီးရှိသည်နှင့်ငါတို့အစတော့ရှယ်ယာကြီးမားသည်။ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီယူနစ်၏ရရှိမှုကိုအတည်ပြုသောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့၏ကားများကိုစတော့ရှယ်ယာစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ကားများနှင့်အတူသင်ပေးကတိ။ စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဘတ်ဂျက်ပြည့်မီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်အခြားတောင်းဆိုချက် (s) ရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရပါ။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကနေဝယ်ရှိသည်နားလည်ကတည်းကကျနော်တို့ကြာကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်နာရီရာ၌ခန့်ထားပြီနှင့်အချိန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျ သာ. ကောင်း၏န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဖို့ဆို feedbacks ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားလာစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏အနာဂတ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအခြားအရာတစ်ခုခုရှာနေလျှင်, ငါတို့သည်အခြားမော်တော်ယာဉ်များအများအပြားကပိုသိပါစေ။
IRIS&CO. (Iris and company)
SAISEI BLDG. 7F, 1-5-2 GINZA, CHUO-KU, TOKYO, 104-0061
IRISCO မှ★★★မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ★★★ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးပို့ကုန်များမှာ !! ကျနော်တို့ကဂျပန်လက္ကားအော်တိုလေလံပွဲမှကားဟောင်းများ၏ဝယ်နှင့်ပို့ကုန်အထူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ဟာ 40 ကျော်လေလံနဲ့ 70,000 တစ်ပါတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, တရုတ်, ဗမာနှင့်ထိုင်ဝမ်သင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာအကြိုက်ဆုံးကားတွေကူညီရှာဖွေမြေပြင်ပေါ်တွင်ဝယ်လက်စကားပြောရှိသည်။ IRIS CO ။ တစ်တိုကျိုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတိုကျိုမြို့ရှိအများဆုံးဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးနှင့်စျေးဝယ်ဧရိယာသော GINZA အတွက်တည်နေရာ။ ကျနော်တို့ကလက်ကားစျေးကွက်အတွက်ဝယ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေလက္ကားစျေးနှုန်းများမှာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဝယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းမှာသင်လိုအပ်သည့်စတော့ရှယ်ယာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကားကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်များကရပ်တယ်။ သငျသညျစိတျပကျြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မြင့်မားသမာဓိ၏မြတ်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်မှီခိုအားဖြင့်ကြီးထွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂျပန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးမော်တော်ယာဉ်တင်ပို့သူများအသင်း (JUMVEA) အသုံးပြုထားတဲ့လည်းဖြစ်ကြ၏။
1-368 ASADA HIRAKO, NISSIN CITY AICHI PREFECTURE
TOMISHO CO, LTD တစ်ဦးချင်းစီဝယ်လက်ကုန်သည်တွေ, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် governmen အဖွဲ့အစည်းများမော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်တင်ပို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဂျပန်ကားရောင်းချသူဖြစ်ပါတယ်။ Tominaga Kyosho, Ltd. အဖြစ်လူသိများ 1973 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1982 ခုနှစ်တွင် Tomisho Co. , Ltd မှပြောင်းလဲတစ်ရွဲအဖြစ် Started အသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်များသည်အလက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်နာဂိုယာအခြေစိုက်ဂျပန်အတွင်းအော်တိုစက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင်အကြီးဆုံးဒေသခံကားပွဲစားကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2005 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုချဲ့ထွင်လာတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအော်တိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ပေးဖို့အများကြီးယုံကြည်မှုရပွီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုယာဉ်များကိုသေချာစေရန်စေ့စေ့စပ်စပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထိန်းသိမ်းရန်။ အခုဂျပန်အတွက်ဦးဆောင်မော်တော်ယာဉ်တင်ပို့သူများတယောက်နှင့်ခြောက်လတိုက်ကြီးအပေါ်ဖောက်သည်နိုင်ငံအများစုတာဝန်ထမ်းဆောင်။ ကျနော်တို့ဟာဂျပန်တပတ်ရစ်ကားများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသင်တို့ကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြကြောင်းကိုသင်၏အိပ်မက်မော်တော်ယာဉ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ကျနော်တို့အဓိကမော်ဒယ်တစ်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော Toyota, Nissan, Honda, Nissan ကား, မစ်ဆူဘီရှီ, Mazda, Subaru, Isuzu ကား, ဆူဇူကီးနှင့် Daihatsu အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူ, အရောင်များနှင့်အသက်အရွယ်အပါအဝင်ဂျပန်ကားများအမျိုးအစားအားလုံးကိုတင်ပို့။ ငါတို့သည်လည်းလောကရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုရန်တိုတိုအသိပေးစာအပေါ်တင်ပို့နိုင်ကြသည်။ TOMISHO CO, LTD ဂျပန်အသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက်သာကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ပါ, ငါတို့သည်လည်းအနည်းငယ်အမည်ကိုတို့အားဤသို့သောမစ်ဆူဘီရှီ, Komatsu, Hitachi IHI, Tadano, Kobelco, Kato နှင့် Sumitomo အဖြစ်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများကဖန်ဆင်းဆောက်လုပ်ရေးမော်တော်ယာဉ်တင်ပို့။ ကမ္ဘာချီမော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းဂျပန်မော်တော်ယာဉ်တင်ပို့အတွက်အတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်ဖြတ်ပြီးဒေသခံဂျပန်ကုန်သည်တွေနှင့်အဓိကလေလံနှင့်ခိုင်မာသောနှင့်ကြာရှည်ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင့်မားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများမှာမော်တော်ကားရယူနိုင်ကြသည်။
M&Z Co., Ltd.
3-4-29, Kusabuecho, Minokamo-shi, Gifu, 505-0045, Japan
"ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေး" ဂျပန်ကားတစ်တင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်လေလံများနှင့်လက်လီမိတ်ဖက်ထံမှဂျပန်ကားဟောင်းဝယ်ယူလျက်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်ကားကိုပေး။ သင့်လိုအပ်ချက်တုံ့ပြန်ရန်, ငါတို့အောက်ပါမစ်ရှင်အောင်မြင်ရန်။ 1 ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာစေရန်3လျင်မြန်စွာနှင့်သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှု4ကားများပေးရန်ကောင်းသောအခြေအနေ2နေသောကားများပေးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
Car Life Hokkaido